अनशनले १ सय रुपैंयामै डाक्टर बन्ने मौका गुम्यो (भिडियोसहित) - TV Annapurna
August 3, 2018 August 19, 2018 Annapurna TV
संसारमा दुर्लभ र विरलै सुन्ने सन्दर्भको साक्षी हामी नै छौँ भन्दा जोसकैलाई यो के होला भन्ने लाग्न सक्छ । हो, सबैलाई समानताको आँखाले हेर्ने, व्यवहार गर्ने संस्था हो समता । यसै समताले सस्तो अर्थात् एक सय रुपैयाँमा शिक्षा मात्रै दिएको छैन, एक सय रुपैयाँमा उपचार गर्न पाउने गरी पनि अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । यस्तै तपाईँ हामी जोसुकैले एक सय रुपैयाँमै उपचार गराउने समता अस्पताल काठमाडौँ बौद्ध स्थित कुमारीगालमा रहेको छ ।
२ हजारमै होलबडी चेक अप भन्दा पत्याउनै गाह्रो होला । नपत्याए पनि सुखै छैन । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य संरक्षक रहेको समता अस्पताल २०७३ साल असार २३ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो । यसै विषयमा समता स्कुलका र अस्पतालका प्रमुख उत्तम संजेलसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विमल खड्काले गर्नुभएको कुराकानी :
समता अस्पताल र स्कुल खोल्ने प्रेरणा कसरी आयो ?
हाम्रो देशमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म गरिने कुरा भनेको गरिबी हटाउने भन्ने हो । तर, हामीले जति गरिबी हटाउने भने पनि कति हट्यो हामी सबैलाई थाहा पाएका छौँ । एउटा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मान्छे कहाँ जाने ती आफ्नो दुःख कहाँ पोख्ने भनेर आज भन्दा १८ वर्ष अगाडी समता स्कुल सुरु गरेको हो र २ वर्ष अघिदेखि अस्पताल पनि चलाएका छौँ ।
समता स्कुल र अस्पताल व्यवस्थापनको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नुभएको छ ?
चुनौती त कसैले नगरेको काम गरेपछि हुन्छ नै । त्यसमा त शङ्का नै भएन । तर पनि संसार यति राम्रो छ कि तपाइ जसरी बाँच्न चाहनुहुन्छ त्यसरी नै बाँच्न देशमा मात्र नभएर संसारभरनै सहयोग गर्ने मान्छेहरूको सहयोगी मनले गर्दा यो स्कुल र अस्पताल चलाउन सजिलो भएको छ । यसको मुख्य श्रेय नेपाली मिडिया र मह जोडी अर्थात् हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई जान्छ । त्यसको अलावा यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ ।
समता स्कुल र अस्पताल नेपालमा नै मात्र छ कि अरू देशमा पनि छ ?
समता स्कुल ७७ नै जिल्लामा छ । त्यसबाहेक इंडीया, बङ्गलादेश र श्रीलंकामा हामीले खोलिसकेका छौँ र माल्दिभ्समा छिट्टै खोल्दै छौँ । अर्को वर्षदेखि सार्क राष्ट्र र समता स्कुललाई जोड्दै छौ ।
समता स्कुल र अस्पतालले दिने सेवाहरू के -के हुन् ?
समता स्कुलले एक सय रुपैयाँमा पिजी टु पिजी मतलब प्ले ग्रुप देखि पोस्ट ग्राजुएट सम्म भनेको नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्म एक सय रुपैयाँमा पढाउने हो । अस्पतालले एक सय रुपैयाँमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तपाइले १०० रुपैयाँमा डाक्टरी पढाउँछु भन्ने योजना बनाउनु भएको थियो ? के यो योजना गोविन्द केसीको अनसन र उनीसँग गरिएको सहमतिले विफल भएकै हो त ?
सरकारले हामीलाई यसपालि सहयोग गर्ने भनेर वचन दिएको थियो । हामी पनि त्यही अनुसार १०० रुपैयाँमा विएस्सी र पिसीएल नर्सिङ पढाउने भनेर तयारी गरेका थियौँ । हुन त डा. केसीले देशको लागि गरेको भन्नुहुन्छ, तर उहाँको कारण सरकारले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने नियम बनायो । त्यस कारण हामी अहिले एक खालको पीडामा छौँ । हामीले अर्को वर्षदेखि १०० रुपैयाँमा ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जिअन सुरु गरेर १ वर्षमा ४० जना दाँतको डाक्टर निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने योजना थियो तर केसीको कारण त्यो योजना सफल हुन सकेन ।
अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? काठमाडौँ बाहिरको लागि त सरकारले अनुमति दिएकै छ ?
बाहिरचाहिँ अहिले भर्खर हस्पिटल खोलिहाल्ने अवस्था छैन । नर्सिङ पढाउनको लागि १०० बेड भएको आफ्नै हस्पिटलको आवश्यकता पर्छ । र डेन्टल खोल्न पनि १०० बेड भएकै हस्पिटल आवश्यकता पर्छ र हस्पिटल जस्तो संवेदनशील चिज अहिले तत्काल काठमाडौँ बाहिर हर ठाउँमा खोल्न सकिँदैन । तर हेरौँ हामीले विशेष खालको काम गर्न लागेको भएर उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र केसीहरूले पनि मद्दत गनुहुन्छ होला हामीलाई त्यस्तो लाग्छ ।
मान्छेहरू लाखौँ खर्च गरेर डाक्टरी पढ्छन् तर तपाँईहरु १०० रुपैयाँमा पढाउने भन्नुहुन्छ यो कसरी सम्भव हुन्छ ?
देश यस्तो महँगीमा चलिरहेको छ । गरिबलाई बाँच्न गाह्रो छ । एउटा गरिबले ढुक्कसँग सस्तोमा पढ्न सकोस् वा ढुक्कसँग उपचार गर्न सकोस् भन्ने हो पहिलो तयारी र अर्को तयारी तपाईँ हाम्रो अस्पतालमा हेर्नुहोस् कोही पनि रिसाएको हुनुहुन्न सबै हँसिलो हुनुहुन्छ । किनभन्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मान्छेलाई २०० प्रतिशत समस्या हुन्छ । पैसा भएकाहरूलाई १०० प्रतिशत समस्या हुन्छ ।
पैसा भएकाहरू ५० % बिरामी हुन्छन् ५०% म बिरामी भएँ भन्ने साइकोलोजी हुन्छ, भने पैसा नभएकाहरूलाई त्यो बाहेक ५० % ऊसँग आर्थिक हुँदैन ,अर्को ५० उसलाई डाक्टरहरूले गर्ने मिसबिहेब अर्थात् डाक्टरहरूले पैसा नभएकाहरूलाई गर्ने व्यवहार छुट्टै हुने भएकोले २०० % समस्या हुन्छ ।तर हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । हामीकहाँ बिरामीले डाक्टरलाई होइन कि डाक्टरले बिरामीलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाँस्नुहुन्छ मीठो बोल्नुहुन्छ । हामीकहाँ भाइचारा राम्रो छ हामी मेची महाकाली भन्दैनौँ हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने ठान्दछौ र सबैलाई समान व्यवहार गर्दछौँ । हामी राम्रो अनुशासन विकास गरेर राज्यले पनि त्यसलाई फलो गरोस् भन्ने हिसाबले काम गरेका छौँ ।
यस्तो कसैले नगरेको काम गर्दा सरकार वा कुनै व्यक्तिले सहयोग गरेका छन् कि नाई ?
सहयोग त संसारभर बसेका सबै नेपालीले गर्नुभएको छ । हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओको सहयोग लिएका छैनौँ । हामीलाई विदेशी र नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ । सरकारले चाहिँ, सरकारले दिने स्वीकृति र रजिष्ट्रेसनमा ठुलो मद्दत गरेको छ ।
७७ वटै जिल्लामा भएका स्कुलहरू कसरी चलेका छन् ?
स्थानीयले नै चलाउनुहुन्छ । हामीले यहाँ केन्द्रबाट एउटा सिस्टम र नियम बनाएर पठाउँछौ र त्यहीँ प्रिन्सिपल अपोइन्ट गर्छौँ र त्यहीँको प्रिन्सिपलले त्यहीँका शिक्षक शिक्षिकाहरू खोजेर बालबच्चाहरू पढाउन हो । रु १०० लिएर अङ्ग्रेजी माध्यममा ।
१०० रुपैयाँमा पढाउन र उपचार गराउन कसरी सम्भव छ त ?
संसारमा असम्भव भन्ने त चिज नै छैन मन हुनुपर्छ सबै सकिन्छ । असम्भव भएको भए हिजो ग्राम्बेलले सुरु गरेको टेलिफोन आज मोबाइलको रूपमा आइसकेको छ । गर्न हामीमा दृढ आकाङ्क्षा छ भने जहाँबाट जसरी भए पनि जुट्छ । कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ भन्नेतिर लागियो भने केही गर्न सकिँदैन र यसलाई सकारात्मक सोच र इमान्दारिताले ठुलो प्रभाव पार्छ । जबसम्म एउटा मान्छेलाई परिवार दुख्दैन जबसम्म एउटा राजनीति गर्ने मान्छेलाई देश दुख्दैन, मलाईचाँही देशको सबैभन्दा मन नपरेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो त्यही दुखेर नै म यसमा लागेको हुँ । र सबैजनालाई मेरो हार्दिकता के छ भने सबैको माया र ममताले समता स्कुल र हस्पिटल सफल भएको हो । खुसीको कुरा के छ भने हामीले चाँडै नै रु १०० मा नर्सिङ पढाउन सुरु गर्दै छौँ र त्यसको लागि डा केसी लगायत सबैलाई सहयोग गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
यसको प्रक्रिया के के हुन्छ ?
प्रक्रिया हामीले लगभग सकाइसकेका छौँ । खाली केसीको कारणले रोकिएको छ । डाक्टर केसीसँग पनि हामी विशेष अनुरोध गर्छौ । यदि उहाँले हुन्छ तपाँईहरुले पढाउनुहोस् भन्नुभयो भने हामी भोलिदेखि नै पढाउन तयार छौँ ।
यसमा क-कसले पढ्न पाउँछन् ?
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका केटीहरू, तराई, पहाड, हिमाल जहाँसुकैका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ।
तपाँइहरुकोमा यति ग्रेड यति अङ्क भन्ने छ कि छैन ?
मार्क्स त सबैले ल्याउँछन् । आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाहरूको विकल्प नै मेहनत गरेर पढ्ने भएकोले उनीहरूले ल्याउँछन् । हाम्रो स्कुलबाट निस्केका ४० -४२ जना डाक्टर भइसके, ४५ र ५० जना इन्जिनियर छन्, १२/१५ जना सिए पनि भइसके । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अरू सम्पन्न मान्छेले भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको ध्यान शिक्षा हासिल गर्ने मात्र हो । हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषामा पढाइ हुने भएकोले हाम्रा बच्चाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर नर्सिङचाहिँ १०० रुपैयाँमा पढ्न पाउनु पर्‍यो । उसले एसइइमा राम्रो अङ्क ल्याएको हुन्छ तर हाम्रो नेपालमा नर्सिङ पढ्न ५/६ लाख रुपैयाँ लाग्छ र सकिने बेलासम्म १० लाख लाग्छ अर्को नर्सिङ पढ्नको लागी त १८ देखि २० लाख खर्च लाग्छ । विएस्सी पढाउनुपर्‍यो भने त २५ देखि ३० लाख भन्दा कममा पढाउँदैनन् । त्यस कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले त त्यति विधि खर्च गरेर पढ्न सक्दैनन् । मलाई थाहा छैन यहाँ मेचीको, महाकालीको वा तराईको कहाँको विद्यार्थीले पढ्छ भन्ने तर समता स्कुलकोले पढोस् भन्ने मेरो कुरा हो ।
डा. केसीको कारणले डाक्टर नर्स पढ्ने विद्यार्थीहरू वञ्चित भएकै हुन् ?
डा. केसीसँग गएर हाम्रो लागि यो विशेष हो भनेर अनुरोध गर्छौ । उहाँले हुँदैन भन्नुभयो भने त सरकारले पनि के नै गर्न सक्छ । जे होस् एक खालको अफ्ठ्यारो हुन्छ ।
समता स्कुल जिल्लामा त पुर्‍याउनु भएको छ तर दुर्गम भेगमा चाहिँ किन पुर्‍याउन सक्नुभएन ?
सदरमुकाममा खुट्टा त टेकिनु नै पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट फर्किन सजिलो हुन्छ । अब हामी पनि चन्दा नै सङ्कलन गरेर गर्ने हो । एकै चोटि दुर्गममा गइसकेपछि त्यहाँ सबै कुरा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेहोर्नलाई पहिले सक्षम हुनुपर्‍यो नि । हाम्रै स्कुलमा पढेका पनि कति सक्षम भएका छन्, पढाउन सक्ने भएका छन् । पहिले आफू खुट्टा टेकेर उभिन सक्षम हुनुपर्छ अनि त्यसपछि दुर्गमतिर लाग्नुपर्ला भन्ने सोच छ ।
समता अस्पतालका यति धेरै डाक्टरलाई आर्थिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
यहाँ हाम्रो हस्पिटलभित्र छिरिसकेपछि सकारात्मक ऊर्जा आउँछ सबैलाई । डाक्टर साहेबहरूले पनि हामीलाई ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ । उहाँहरूले जति पैसा अरू हस्पिटलमा लिनुहुन्छ त्यति पैसा हामीसँग माग्नुहुन्न । १ घण्टाका लागि हामीले बोलायौँ भने २ वा ३ घण्टा उहाँहरूले काम गरिदिनुहुनेछ । सबै मान्छेको सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ, हामीले चाहिँ डाक्टर साहेबहरूको सकारात्मक पाटोलाई पगाल्ने कोसिस गरेका छौँ । त्यसैले यो हस्पिटल चल्न सजिलो भएको छ ।
अस्पतालको जग्गा पनि ?
व्यक्तिगत जग्गामा हो यस अस्पतालले जग्गाधनीलाई वार्षिक ७ लाख तिर्दै आएको छ । ७ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको समता अस्पतालमा हाल २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका हुनुहुन्छ । ४ जना नर्स, एचए ४ जना, रेडियोग्राफर ४ जना, ल्याबमा ५ जना हाम्रो अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
बिरामीले यस अस्पतालमा के के सेवा सुविधा पाउँछन् ?
एउटा होलबडी चेक अप भन्ने छ त्या चाहिँ सबैले गरोस् । हामीले यहाँ २ हजार राखेका छौँ । सरकारले पनि ५ हजार साढे पाँच हजार जति लिन्छ । त्यो २ हजार पनि तिर्न नसक्नेले नतिरोस् ।
हामी कहाँ हर्ट सर्जरी गर्न नसके पनि तपाईँको मुटु बिग्रँदै छ है भनेर भन्न सकियोस् र सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भने सक्नुहुन्छ भने जहाँबाट भए पनि एक पटक समता हस्पिटल आउनुहोस् होल बढी चेक अप गरिदिनुहोस् । र १०० रुपैयाँमा एक पटक चेक गराएपछि उसलाई डा. ले लेखिदिएको प्याथोलोजी सबै १०० रुपैयाँमा नै गर्न पाउँछ र दाँत बिग्रेको छ भने दाँत पनि १०० मा नै बनाउन पाउँछ ।
औषधी ठुला अस्पतालमा बिरामीले धेरै किन्ने गरेका हुन्छन् डिस चार्ज हुँदा बाँकी रहेका औषधी हामीले टोकरी राखेर सङ्कलन गर्ने भनेका थियौँ तर अस्पतालले हामीलाई अनुमति नदिएकाले अहिले बिरामीले औषधी आफै किन्नुपर्ने हुन्छ । समता अस्पताल कसैलाई थाहा छ भने आफ्नो घरमा बाँकी रहेका औषधी अस्पतालको टोकरीमा ल्याएर दिनुभयो भने हामी डाक्टरसँग सल्लाह गरेर गरिब दुःखी असहायलाई निःशुल्क औषधीको पनि व्यवस्था गर्ने योजनामा छौँ । तपाइहरूले यसमा सहयोग गनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
एक उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ अबका दिनमा कसरी अगाडी बढ्दै हुनुन्छ ?
समता अस्पतालभित्र मान्छे छिरेपछि उपचार नभएर मर्न नपरोस र अस्पतालबाट दिइने सेवा जे छन् ती सेवा लिएर जावस भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो । यो संस्था आर्थिक अवस्था नितान्त कम भएकाहरूका लागि खोलिएका संस्था हो । त्यसैले जसको आर्थिक अवस्था कम छ पैसाकै कारण उपचार रोकिएको छ भने हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छौँ ।
अब के हुन्छ दुई राप्रपाको एकता ? वार्ता तत्काल स्थगित गर्न कमल थापाको निर्देशन